कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फि'र्ताको मा'ग रा'ख्दै डा. गोविन्द केसी अ'नश'नमा बसे - Filmy News Portal Of Nepal
कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फि’र्ताको मा’ग रा’ख्दै डा. गोविन्द केसी अ’नश’नमा बसे
संसारभर म’हामा’रीका रूपमा फै’लिइरहेकाे कोरोना भा’इरस (कोभिड–१९) को सं’क्रम’णवाट जाेगिन भन्दै सरकारले देशभर ल’कडाउ’न गरेकाे छ । एकठाउँवाट अर्काे ठाउँमा जान नपाउने सरकारकै निर्देशन भएका बेला चिकित्सा शिक्षामा सु’धार गर्नुपर्ने माग राख्दै धेरै पटक अ’नशन नै बसेका डा. गोविन्द केसीले फेरि दार्चुलामा अ’नसन सुरु गरेका छन् ।
दार्चुला लगायत सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यातायातको सहज पहुँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यस्थाव, भारतबाट मि’चिएको नेपाली भूमि फि’र्ता गर्ने प्र’क्रिया तत्का’ल सुरु गर्नुपर्ने मागसहित मंगलबारदेखि दार्चुलामा अ’नसन सुरु गरेका हुन । सदरमुकाम खलंगाको जगन्नाथ मन्दिरमा उनले १८ औं अ’नसन सुरु गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको मा’ग रा’खेर अनसन बस्दै आएका डा. केसीले यसपटक भने सीमा सु’रक्षाको बिषयलाई पनि जोडेर अनशन गरेका छन् । सीमा क्षेत्रका लगायत सबै नागरिकहरुको स’मृद्धि, नेपालको सा’र्वभौम’सत्ताको र’क्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सवैको प’हुँच पुर्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
उनले गण्डकी प्रदेश, डडेल्धुरा, बर्दिबास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई शी’घ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चा’लन गर्नुपर्ने भन्दै विगतमा आफूसँग भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मा’ग राखेका छन् ।